Inona no azon'ireo Amazon amin'ny fitaovam-pihariana atao mba hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa
Raha manana traikefa amin'ny fivarotana vokatra any Amazona ianao, dia tokony ho fantatrao fa dingana ara-potoana izay mitaky ezaka lehibe sy fanatsarana tsy tapaka. Tsy afaka ny hitantana ny lafiny ara-barotra amin'ny ankapobeny ianao, indrindra raha mampiasa Amazonia ianao ho toy ny loharanom-bola fanampiny. Soa ihany, afaka mahita fitaovana amidy matihanina Amazon ianao izay hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa. Amin'ny fampiasana azy ireo, dia ho afaka hanokana fotoana bebe kokoa amin'ny fivoaran'ny orinasa ianao ary hampivoatra ny dingan'ny fanaraha-maso ny orinasa Amazon business.
Ity lahatsoratra fohy ity dia natokana ho an'ireo fomba ahafahanao manatsara ny raharahanao amin'ny fampiasana fitaovana amidy Amazon. Aoka àry isika hijery akaiky ireo fitaovana ireo. Eto aho dia manapotika azy ireo amin'ny zavatra ataony, fa tsy voatery hoe ny baiko omeko azy ireo.
Ny Jungle Scout dia rindrambaiko maimaim-poana amin'ny aterineto izay manampy anao hahita ny vokatra azonao. avy amin'ny. Azo ekena ny hampiasana ity fitaovana ity mandritra ny dingana voalohany amin'ny fampielezan-kevitra fanatsarana anao satria mety hampihena ny fotoana ijoroana izany ary hanaisotra ireo risika rehetra manomboka.
Misy safidy roa azonao ampiasaina amin'ny fampiharana Jungle Scout. Ny voalohany dia ny tranonkala iray. Izany dia ahafahanao mahita loka ara-bola mahavokatra sy vokatra mahasoa amin'ny alàlan'ny katalaogy Amazon. Fampiharana Jungle Scout dia manome fahafahana anao hanivana ny tahiry rehetra, amin'ny varotra, ny varotra, ary ny sokajy mba hahitana ny lisitra mety indrindra. Ankoatra izany, mampiasa an'io fitaovana io ianao, afaka manara-maso ny toerana sy ny vidin'ny mpifaninana. Amin'ny fampiasanao an'io fitaovana io ho Chrome Extension, dia azonao atao ny mijery ny vokatra eo amin'ny pejy eo amin'ny pejy rehefa mijery ianao. Izy io dia hanome anao ny vidin'ny vokatra tsirairay, ny toerana misy ny lanjany, ny fandinihan-tserasera ary ny maro hafa ho an'ny fampitahana vokatra mazava.
AMZ Tracker dia fitaovana maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny Amazon mpivarotra. Manampy amin'ny fananganana filaharana miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fampiroboroboana, fanatsarana ny fihenam-bidy sy ny fanadihadiana amin'ny fifaninanana.
Na izany aza, ny tombontsoa voalohany azo ampiasaina ity rindrambaiko ity dia fikarohana fikarohana manan-danja. Araka ny voalazan'ny vohikalan'ny orinasa, AMZ Tracker no voalohany mpamorona tenimiafan'i Amazon teo aloha. Midika izany fa manana tahirin-kevitra goavana amin'ny teny fikarohana amazoniana izy ary afaka manome fahafaham-po ny filàna fanatsaràna. Ampiasao ity fitaovana ity, azonao atao ny mahita ny teny ifankafantarana mifandraika amin'ny vokatrao ao amin'ny valin'ny fikarohana Amazon.
Araka ny tetikadin'ny fiarovana AMZ Tracker, afaka mahazo fampandrenesana miverimberina ianao isaky ny mandao ny mpanjifanao latsaky ny 5-taona. Manome anao fahafahana hamaly izany avy hatrany izy ireo hamaha ny olany ary hangataka azy ireo hanangana ny valiny. Fanampiana iray hafa ilaina AMZ Tracker dia misintona fampandrenesana. Ity serivisy ity dia manome fampandrenesana rehefa misy mpivarotra hafa manandrana manala ny lisitrao. Azonao atao ny mamerina azy ireo alohan'ny hanangonany angona manan-danja eo amin'ny vokatrao.
Noho izany, ity fitaovana ity dia mihoatra lavitra noho ny laharana tracker satria manome anao ny fahaiza-manaonao ny manatsara ny lisitry ny vokatrao, manatsara ny laharana vokatrao, ary hita ao amin'ny Amazon Buy Box Source .